ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်သာသနာနှင် ထိုင်းသာသနာနှို င်းယှဉ်စရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်သာသနာနှင် ထိုင်းသာသနာနှို င်းယှဉ်စရာ
ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်သာသနာနှင် ထိုင်းသာသနာနှို င်းယှဉ်စရာ
Posted by ကိုပါကြီး on Feb 3, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
“မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ အထင်သေးတဲ့ ထိုင်းသာသနာ“
ဒီလောက်ကြီးကျယ်ပြီး ခန်းနားထည်ဝါတဲ့ အလုပ်တွေကို မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ အိမ်ကျယ်များသာဖြစ်ကြပါသည်။ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာလို့သိအောင် လုပ်ပြနေတာ တိဘက် ဒလိုင်းလားမား မဟာယာနနှင့် ထိုင်း သီရိလင်္ကာ ဘုန်းကြီးများသာဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေက ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ မရှိရင် သာသနာမပြုတတ်တော့ပါဘူး။
မဟာယာနတွေ ထေရ်ရဝါဒတွေပြောနေရင်လဲ အပိုပဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ ခွဲခြားဆက်ဆံနေရတာပါ။ ပြည်ပထွက်ကြည့်ပါ။ ထေရဝါဒဆိုသူတွေ မဟာယာနဲ့ အတူတူ ဆွမ်းများ ဘုဉ်ပေးကြပါတယ်။ ….. ထိုင်း သီရိလင်္ကာဆိုတာ ထေရဝါဒ အမည်ခံပဲ။ ဒါပေမယ့်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေလောက် သဘောထားမကျဉ်းမြောင်းပေ။ အချင်းချင်း ရုံကမ်းတွေကို မရောက်ကြပေ။
မိမိညံဖျင်းကြောင်းကို သိကြလော့ ……
မြန်မာဘုန်းကြီးတွေ အချင်းချင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်လော့…
ဟိုတရားမှားတယ် ဒီတရားမှာတယ်လို့ပြောတွေ ရပ်စဲလော့…..
ဘုရားတရားတွေကို အမှားအမှန် ဆုံးဖြတ်ရအောင် ဆုံးဖြတ်သူကိုယ်တိုင် အရိယာလော့…….
ပကာသနနဲ့ မိမိရဲ့ မိုက်ဂုဏ်ဖြစ်မယ့် အလုပ်တွေကို ရပ်စဲလော့….
မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများကို စက်တင်ဘာဖြစ်တုန်းကတော နဲနဲသိသွားတယ်ဗျ။
ဘုန်းကြီးတွေ ဝိပဿနာပြတယ်ဆိုတာ လူအများစုတကယ်ကို မသိတာပါ။
မြန်မာဘုန်းကြီး ပညာရေးတွေ ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့အတွက် ငွေတက်နိုင်သော ရဟန်းအချို့သည် သီရီလင်္ကာ။ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီး တပည့်ခံနေရပါသည်။
မိမိလည်း ပြည်တွင်းမှာ နေတုန်းက မိမိကိုယ်မိမိ ဘဝင်တလုံးဖြင့် ငါတို့ပဲ ကမ္ဘာမှာ သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစမျိုး ဝါဒတွေကို ရိုက်သွင်းခြင်းခံရသူတစ်ဦးပါ။ အရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီးထင်ခဲ့ပါသည်။
အဲဒီ အထင်တလုံးအတွက် ရှက်လည်းရှက်ပါသည်။
ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီး အရေးတွေလဲ ကြားလိုက်ရရင် စိတ်မကောင်းစရာတွေကြည့်ပါပဲ။ ဟိုဘုန်းကြီးက မှားတယ် ဒီဘုန်းကြီးမစ္ဆာနဲ့ ညှင်းခုန်နေကြတာနဲပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်။
ဘယ်သူကိုထောင်ချသင့်တယ်စတဲ့ စကားတွေလဲ အခုတလော ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားနေရပါတယ်။ များစွာ စိတ်မကောင်းပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိတ်သဘောထား မပြည့်ဝတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ပညာတက်လာမယ်။ လူထုက ထောက်ခံလာမယ်ဆိုရင်တော့ ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘာသာရေးကတော့ ရင်မအေးစရာပဲ။
တစ်ချိုကပြောသေးတယ်။ တို့က သာသနာအတွက်ဆိုရင် အသက်ပေးတယ်။ ဘာာညာညာ ပေါဗျာ၊ အသက်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဘုရားက ငွေမကိုင်နဲ ပြောထားတယ်။ အဲဒီ သိက္ခာပုဒ်လေးကိုပဲ စောင့်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ (လေကျယ် ရဟန်းအတွက် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
သင်္ကန်းအရေးခြုံပြီး ကျော်စောမှု သူများအထင်ကြီးလိုမှု့ကို ရှာဖွေ နေတဲ့ နာမည်ကြီးချင်သော အရေခြုံများသည်… မိစ္ဆာတွေကို ပါယ်ရှင်းရမည်၊ ထောင်ချရမည်စတဲ့ နာဇီလေသံများဖြင့် ဘာသာချစ်စိတ်ဟုဆိုကာ လူအများကိုခဏခဏ ပြောတက်ကြပါသည်။
အဲဒီ စကားတွေကို လူတွေကလည်း အရမ်းသဘောကျပါသည်။
ဘုရားသာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့၊ ရဟန်းများကို မြန်မာလူထုကြီးက အားကျနေလိုက်ကြတာ။ ပံပိုးနေလိုက်ကြတာ။ ရင်လေးစရာပဲ။
ဘုရားက ငါ့ဝါဒကို ဆန့်ကျင်ရင် ထောင်ချ သတ်ဖြတ်စေလို့ မဟောကြားပေ။ မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူတို့သည် တကယ် ဂရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။
တကယ်လို့ ရဟန်းတစ်ပါး အယူမှားနေရင် အဲဒီအယူမှားနေတဲ့ ရဟန်းကို လမ်းမှန်ရောအောင် ဟောကြားပေးရမည်ဟု ပြောဆိုထားပါသည်။
တကယ်လို့ အယူလွဲချော်နေတဲ့ ရဟန်းကို အယူမှန်အောင် ဟောနိုင်စွမ်းမရှိပါက သာသနာပြုသူ၏ ညံဖျင်းမှုသာဖြစ်ပေသည်။
ဒီခေတ်ရဟန်းတွေက မိမိရဲ သာသနာ ပြုနိုင်စွမ်း ၊ ဟောပြောမှု့ညံဖျင်းနေတာကိုတော့ မသိကြဘူး။
အယူမှားတယ်ဆိုပြီး ခင်ညွန့် ထောက်လှန်းရေးအစိုးရလို လျောက်လုပ်ချင်နေတဲ့ချင်တဲ့ပုံစံပါပဲ။
အာဏာရှင် အစိုးရအောက်မှာ မွေးတယ် သိမ်ဝင်တယ်။ ကြီးပြင်လာတယ်ဆိုတော့လည်း အာဏာရှင်ရဲ့ အငွေသက်လေးတွေတော့ ပါလာမှာပေါ့။
သိထားဖို့က မြန်မာဘုန်းကြီးတွေကို ကမ္ဘာက တကယ်ကိုမသိတာပါ။ သိအောင်လဲ ဘယ်သူမှမကြိုးစားကြဘူးဆိုတာပဲ။
ကမ္ဘာသာသနာပြုဖို့ နေနေသာသာ မြန်မာနိုင်မှာ တနေ့တခြား အခြားဘာသာဝင်တွေ များလာနေမှု့ဟာ ဘုန်းကြီးနဲပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးတွေ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာသက်သေပြနေတာပဲ။ အချင်းချင်းပဲ ရန်ပွဲလုပ်နေတာဆိုတော့ အချိန်မရဘူးနဲတူပါရဲ့။
လူတကာတွေ တကာမတွေကို သနားတယ်ဆိုရင် အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်နေတာတွေကို ရပ်စဲလော…….. ရပ်စဲလော့….
လူတစ်ယောက် အယူမှားနေတယ်ဆိုတာ ။ အယူမှားနေတဲ့သူများ မှာ အပြစ်မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူဆိုတာ အမြဲတမ်းမှားနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေ အယူမှားနေတာကို အယူမှန်အောင် မပြောပြနိုင်သူသာ အပြစ်ရှိပါသည်။ အယူမှားတွေကို လက်ခံနိုင်အောင် ပြောစမ်းပါ။ ဟောစမ်းပါ။ စာတွေသင်ထားတယ်လည်းပြောသေးတယ်။ စာသင်တယ်ဆိုတာ အယူမှားနေတဲ့သူတွေကို အယူမှန်အောင် ပြောပြဖို့ စာသင်ထားတာ မဟုတ်လား။ ဘာလို့ ဝါဒမတူရင် ထောင်ချမယ်လို့ ပြောနေရတာလဲ။ ရွှေမြန်မာ ဘုန်းကြီးတို့ရယ်……။
(အသောက အသောက အသောက ၏ facebook.com ရှိ post မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
“လူတစ်ယောက် အယူမှားနေတယ်ဆိုတာ ။ အယူမှားနေတဲ့သူများ မှာ အပြစ်မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လူဆိုတာ အမြဲတမ်းမှားနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။”
အယူဝါဒတွေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ဝါဒမှ အမှန်ဆိုသည့် ကျဉ်းမြောင်းသည့် ဘာသာဝါဒစွဲများ မရှိသင့်တော့ပါ။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ လူသားတွေ အသိအမြင်ပိုမိုကျယ်လာခြင်းကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းသည့် အယူများဖြင့် အံမကျနိုင်ကြတော့ပါ။
“၀ါးလုံးခေါင်ထဲမှာ လသာသလို” ဖြစ်နေတဲ့ ယနေ့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ စဉ်းစားစရာ။
လူတွေ အယူမှားနေတာကို အယူမှန်အောင် မပြောပြနိုင်သူသာ အပြစ်ရှိပါသည်—
ဒါကြောင့်–လူတွေ အကုန်လုံးကို ဘု၇ားဖြစ်ပြီး အယူမှန်အောင် မဟောနုိင်ခဲ့တဲ့ ဂေါတမ ဘု၇ားပဲ အပြစ်၇ှိပါသည်—ကိုယ့်ဟာကိုယ် နေချင်သလို နေ လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့ လူတွေ မှာ အပြစ် မ၇ှိပါ—-နော့်——–
မဟာယာနတွေ ထေရ်ရဝါဒတွေပြောနေရင်လဲ အပိုပဲ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ ခွဲခြားဆက်ဆံနေရတာပါ။ ပြည်ပထွက်ကြည့်ပါ။ ထေရဝါဒဆိုသူတွေ မဟာယာနဲ့ အတူတူ ဆွမ်းများ ဘုဉ်ပေးကြပါတယ်။ ….. ထိုင်း သီရိလင်္ကာဆိုတာ ထေရဝါဒ အမည်ခံပဲ။ ဒါပေမယ့်။ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေလောက် သဘောထားမကျဉ်းမြောင်းပေ။
ဒါကြောင့် —-တစ်ခါတုန်းက ဥပုသ်ပြုဖို့ စောင့်နေတဲ့ ၇ဟန်းတွေကို —-” ပ၇ိသတ် မစင်ကြယ် လို့ဆို ပြီး အကြာကြီး စောင့်နေခဲ့တဲ့ ဥပုသ်မပြုခဲ့တဲ့ ဘု၇ားက တော်တော်ကို ခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံတာပဲနော်—သူ့ ဟာသူ သူ့ စိတ်နဲ့ သူ နေချင်သလို နေမှာပေါ့ နော့——-ဘု၇ားနဲ့ ဘာဆိုင်တုံး)))))
( ဘုရားတရားတွေကို အမှားအမှန် ဆုံးဖြတ်ရအောင် ဆုံးဖြတ်သူကိုယ်တိုင် အရိယာလော့…….)
အရိယာမပြောနဲ့ ရဟန္တာကြီးဖြစ်သည့်တိုင်အောင် တန်ခိုး ပညာအရာမှာ
အများအားဖြင့် ဆရာတော်ကြီးတွေဟာ ငယ်ဖြူတွေများပါတယ်
ကျုပ်တို့လို လောကီနဲ့ သိပ်မပတ်သက်လှပါဘူး
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဒီလိုလျှောက်တင်ကြမယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ် ( အထင် )
အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား ဒီမိုကရေစီတို့ ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့
အခြားဘာသာအဖွဲ့အစည်တွေပါ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့လည်းမဟုတတ်ပါဘူးဘာဘူး ညာဘူး
ဆိုပြီးလျှောက်ကြတော့ ဟိုက ငယ်ဖြူတွေဗျ
သူ့ရဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ ကြည်ညိုတာကလည်းရှိသေးတယ်
ဒါက ဒီပို့စ်နဲ့ ဆိုင်လည်းဆိုင်တယ် မဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူး
ဒါနဲ့ခုပေးထားတဲ့လင်ဆုံးတာနဲ့ ထပ်ပေါ်လာတဲ့ လင်တွေထဲက
48:38 အရှည်ရှိတဲ့ လင်ထဲက ဘုန်းတော်ကြီးက ဘာတွေ ဟောကြားနေတာတုန်း
ကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ နေရာတစ်ကာပါတဲ့လူကို အချိုမှုန့် လို့ခေါ်ကြလို့ပါ ကိုပါကြီးရယ်
ဂိန် ဂိန် ဂိန် ဂိန်